Muxuu ka yiri Petr Cech dib ugu soo laabashada Jose Mourinho ee horyaalka Premier League?? – Gool FM
(London) 21 Nof 2019. Goolhaayihii hore kooxaha Chelsea iyo Arsenal ee Petr Čech ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in markale uu Jose Mourinho ku soo laabto shaqada tababarka.
Dhinaca kale Goolhaayaha reer Czech ayaa wuxuu tilmaamay in soo laabashada shaqsiyada sida Jose Mourinho oo kale ay tahay dhacdo weyn, sababa la xiriira inuu ka mid yahay tababarayaasha ugu guulaha badan tobankii sano ee la soo dhaafay.
Subaxnimadii Arbacada, kooxda Tottenham Hotspur ayaa ku dhawaaqday magacaabista Jose Mourinho inuu yahay macallinka Spurs, isagoo badel u noqday Mauricio Pochettino, kaasoo shaqada laga ceyriyay Talaadadii lasoo dhaafay.
Jose Mourinho ayaa ka maqnaa shaqada tababarka, ku dhawaad ​​hal sano, kaddib markii laga ceyriyay kooxda Manchester United bishii December ee sanadkii hore.
Haddaba Petr Čech ayaa wuxuu ka hadlay aragtidiisa kaddib markii Jose Mourinho loo magacaabay macalinka cusub ee kooxda Tottenham Hotspur wuxuuna yiri:
“Waqtiga kaliya ayaa inoo sheegi doona waxa dhici doono, laakiin soo laabashada shaqsiyada sida Jose Mourinho waa dhacdo weyn”.
“Waa mid ka mid ah tababarayaasha ugu guulaha badan tobankii sano ee la soo dhaafay, haatana wuxuu ku soo laabtay horyaalka Ingiriiska, xaqiiqdii waxaan u rajeyneynaa wanaag”.
Waxaa xusid mudan in Jose Mourinho uu sugayo kulanka adag ee London derby ah, kaasoo ay sabtida London Stadium ku booqan doonaan kooxda West Ham United.